Izifundo ezahlukahlukeneyo kwii-geofumadas
Ukuqala, umbuzo olula kakhulu. Yintoni ubukrelekrele bendawo? Ubukrelekrele bendawo (i-LI) bufezekiswa ngokubonakalayo kunye nohlalutyo lwedatha yendawo yokuphucula ukuqonda, ulwazi, ukwenza izigqibo kunye noqikelelo. Ngokongeza uluhlu lweedatha, ezinje ngabantu, ukugcwala kwabantu, kunye nemozulu, kwimephu efanelekileyo, imibutho ...
Kuhlelo lwe-6 lweMagazini iTwingeo, sikwazile ukunika incasa yeyiphi iqonga elitsha lolawulo lwedatha yendawo engafakwanga iStudio. Eli qonga lokuyila, ukusukela ngoFebruwari 1, 2021, lisenza abantu ukuba bathethe ngezixhobo ezinokubakho zokuphatha nokuphatha ezinkulu ...
Ushicilelo lwesithandathu lweTwingeo Magazine lilapha, elinomxholo ophambili "Izinzwa ezikude: indlela yokuziphatha efuna ukuzibeka kwimodeli yenyani yasezidolophini nasemaphandleni". Ukuveza usetyenziso lwedatha efunyenwe ngenzwa ezikude, kunye nawo onke amanyathelo, izixhobo okanye iindaba ezinxulumene ngqo nokubanjwa, ...
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwicandelo lokuziva kude, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Ngokunjalo, kwabo banqwenela ukongeza ulwazi lwabo, kuba bayinxalenye yesoftware kwaye banqwenela ukufunda ukulungelelanisa ulwazi lwendawo kunye neminye imijikelezo yokufumana, ukuhlalutya kunye nokulahla ...
Le yikhosi esebenzayo, ngokungathi uhlala phantsi nomhlobo akuxelele indlela yokusebenzisa iFilmora. Umqeqeshi ngexesha lokwenyani ubonisa indlela yokusebenzisa le nkqubo, zeziphi iindlela onokukhetha kuzo kwiimenyu kunye nendlela ephuhliswa ngayo iprojekthi. IFilora ngumhleli wevidiyo omangalisayo, ekulula ukuwusebenzisa, obonakalayo kwaye kakhulu ...
Izifundo zeArtGEO, Ezahlukeneyo
Ubume bomhlaba? Sifikile ngokuzingca okukhulu nolwaneliseko kuhlelo lwe-4 lweMagazini iTwingeo, kanye ngeli xesha lobunzima belizwe, nelithi, kwabanye, libe ngumqhubi weenguqu kunye nemiceli mngeni. Kwimeko yethu, siyaqhubeka nokufunda- ngaphandle kokuyeka - kuzo zonke izibonelelo ezinikezelwa yindalo yedijithali kunye nokubaluleka ...
Uyayithanda i-GIS, ke apha unokufunda iArcGIS 10 ukusuka ekuqaleni kwaye uqinisekiswe. Le khosi i-100% elungiselelwe ngumenzi webhlog ka "Franz", ukuba ulindwendwele elo phepha uya kwazi ukuba uza kufunda, ukuba akunjalo, yenze ngaphambi kokuqala. Kubandakanya imithambo kunye nencwadi: Izinto ezisisiseko ze-GIS. Ewe…
Ikhosi ye-QGIS 3, siqala ngo-zero, siye ngqo kwinqanaba de sifike kwinqanaba eliphakathi, ekugqibeleni kunikezelwa isatifikethi. IiNkqubo zoLwazi lweJografi i-QGIS, yikhosi eyilelwe phantse ngendlela ebonakalayo. Idibanisa icandelo elincinci leengcingane ezivumela abafundi ukuba basekele ulwazi lwabo kwi-GIS, ...
[iphepha elilandelayo] = "ArCADia 10"] Ngaba ndifuna itekhnoloji ye-BIM namhlanje? Ixesha lokwakha iModeli yoLwakhiwo (BIM), njengoko kuchaziwe kwiWikipedia, yimodeli yolwazi malunga nolwakhiwo kunye nezakhiwo. Nangona eli gama liqhelekile kutshanje, abantu abaninzi abayiqondi kakuhle le nto kuba ...
Ke ungumnikazi weChrysler onekratshi? Luhlobo luni lweChrysler lwakho? Ngaba yiVoyager, 300, Neon, PT Cruiser, Vision, Viper, Sebring, Crossfire, okanye Grand Caravan? Zonke iimoto zohlobo lweMelika uChrysler zahlukile kwaye zinikezela ...